मार्केटिंग अपरेशन उत्कृष्टता को5आयाम | Martech Zone
एक दशक भन्दा बढीको लागि, हामीले अवलोकन गर्‍यौं बिक्री संचालन मद्दत गर्न र संगठनहरूमा वास्तविक समयमा बिक्री रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्न। उपराष्ट्रपतिले दीर्घकालीन रणनीति र बृद्धिमा काम गर्यो, बिक्री संचालन बढी रणनीतिक थियो र बललाई निरन्तरता दिन दैनिक नेतृत्व र कोचिंग प्रदान गर्‍यो। यो मुख्य कोच र आपत्तिजनक कोच बीचको भिन्नता हो।
मार्केटिंग अपरेशन्स के हो?
ओमनिचेनेल मार्केटिंग रणनीति र मार्केटिंग अटोमेसनको आगमनको साथ, हामीले मार्केटिंग अपरेशन प्रबन्धनको साथ उद्योगमा सफलता देख्यौं। मार्केटिंग विभाग सामरिक स्रोतहरू, सामग्रीको अभियान अनुकूलन, र अन्य पहलहरूको अनुकूलन र उत्पादनमा काम गर्दैछ। जस्तो ब्राइटफनेलको नादिम होसिन एक बर्ष पहिले लेखिएको थियो:
जब मार्केटिंगले अधिक र अधिक बिक्री चक्र खान्छ, यी प्रविधिहरू केन्द्रमा हुन्छन्। र यसको मतलब यो छ कि मार्केटिंग अपरेशनहरू एक बढ्दो रणनीतिक भूमिकामा परिणत हुन्छ - मार्केटिंगको चौराहेमा आफैलाई स्लट गर्दै विश्लेषण र निर्णय लिने र राजस्व उत्पादन रणनीति।
डेभिड क्रेन र टीम इन्टिग्रेटमा सँगै यो मजा इन्फोग्राफिक, राख्छन् मार्केटिंग अपरेशन कौशल खेल, p निर्णायक आयामहरू जुन मार्केटि operations अपरेशन उत्कृष्टता सुनिश्चित गर्दछ।
के मार्केटिंग सञ्चालनहरू सफल बनाउँछ?
मार्केटिंग पंक्तिबद्ध - मार्केटिंग अपरेशनहरू नजिकैको सबै टोलीहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्दछ टूलहरू र टेक्नोलोजीको प्रबन्ध गर्न जुन बिक्री र मार्केटिंग पंक्तिबद्ध गर्न सजिलो हुन्छ। केवल २%% विक्रेता भन्छन कि त्यहाँ मार्केटिंग र बिक्रीको बीचमा राम्रो सहकार्य छ।
प्रणाली एकीकरण - मार्केटिंग अपरेशन्स सबै प्रणाली र उपकरणहरु लाई सुनिश्चित गर्दछ ग्राहक संचार लाई सुधार गर्दछ। म जोड्न चाहन्छु कि लक्ष्य को ग्राहक को एकल दृश्य हुनु पर्छ कि भर में साझा किया गया है। # सीआरएम र मार्केटिंग # स्वचालित प्रयोग गर्ने of 33% कम्पनीहरूले मात्र दुबै राम्रोसँग एकीकृत भएको बतायो।
डाटा गुणस्तर - मार्केटिंग अपरेशनहरू डाटा स्वच्छता र संगठन-व्यापी उपयोगिताको लागि यसको दृष्टिकोणमा लगनशील हुनुपर्छ। २% B25B मार्केटिंग डेटाबेस गलत छन् र %०% कम्पनीहरूसँग अविश्वसनीय डाटा छ।
नेतृत्व वेग - मार्केटिंग अपरेशनहरू सशस्त्र बिक्री टीमहरूको साथ लगत्तै डेटाको साथ सम्भावित तुरून्त सेवा गर्न चार्ज गरिएको छ। To० देखि %०% विक्रेतामा जान्छ जुन पहिले प्रतिक्रिया दिन्छ।
मापन र एनालिटिक्स - जब मार्केटिंग टेक्नोलोजी क्षमता विस्तार हुन्छ, अधिक डाटा संगठनमा सारिनेछ। यसको लागि कसैलाई संगठनको प्रदर्शनलाई बुझ्ने सुविधाको आवश्यक पर्नेछ। मार्केटिंग विश्लेषण आगामी years बर्षमा budget 84% बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
टैग: डाटा गुणस्तरएकीकृतसीसा वेगमार्केटिंग पign्क्तिबद्धतामार्केटिंग एनालिटिक्समार्केटिंग उत्कृष्टतामार्केटि measure मापनमार्केटि operations कार्यहरूमार्केटिंग अपरेशन उत्कृष्टतामार्केटिंग अप्समार्केटिंग ops उत्कृष्टतामार्केटि performance प्रदर्शनबिक्री पign्क्तिबद्धप्रणाली एकीकरणप्रणाली एकीकरण